China 1.7m Hupamhi Kendendende Fabric Heat Transfer Transfer Machine fekitori nevatengesi | Asiaprint
1.Gadzirisa otomatiki chinzvimbo chejira uye bepa, rakakodzera kudhinda rolling jira, jira tepi kana amburera jira zvichingodaro.
2. Uchishandisa tekinoroji nyowani, kupinza zvinhu zvinodzora, kunyatsoita mushe.
3. Kuchenesa kwakakodzera, otomatiki nzvimbo, yakachengeteka uye yakasimba.
4. Inodziya vhiri inoshandisa rakavharwa kuitisa oiri, inogona kuvimbiswa. Iyo tembiricha yakanyanya kunyanyisa uye yakasimba.
5. Inotora tekinoroji yepamusoro-yekudziya-oiri uye mvura yakatenderera kupisa conduction, iine kunyangwe kudziyisa uye kwakanyanya kupisa kupisa.
6. Kunze kwetangi-yekuzadza tangi uye auto-kuvhara vharuvhu inoita kuti ive nyore kushandura kupisa kupisa.
7. Dhizaini yemhepo yekumanikidza yekumanikidza inoita rotary yekudhinda muchina ita zvakakwana kuendesa.
8. Inogona kurega iro gumbeze rive otomatiki kururamisa, kuve nechokwadi kwechinyakare orbit, ita kugona kwekupisa kupisa kusimudzira kuchengetedza iyo yekuchinjisa mhando yakavimbiswa
Item Zita karenda
Kudhinda / dhiramu upamhi 1700 mm 67 inch
Roller dhayamita 420 mamirimita 16.5 padiki
Rated goho 25.5 KW
Speed 0-8m / min
Kurema 1800 KG
Kukura kwepacking 2630 x 1390 x1600 mm
1, Tarisa kuti zvese screws mu mainframe zvakasununguka kana kwete, sunga kana zvakasununguka.
2, Mushini wese unofanirwa kuiswa padanho nekwanisi inokwana; furemu yehuni pamusoro peiyo inotsvedza vhiri uye nhanho nongedzo inosarudzwa.
3, Yakaenzana mutoro leakage redunhu mudariki zvakasiyana pane uyu muchina ne3 × 6 × 6 + 1 × 4 × 4 yepasi rese simba waya. Iyo crust yemuchina inofanirwa kuvhurwa zvakasiyana.
4, Chengeta midziyo iri pamwero apo kugadzwa. Shandisa zvikamu zviviri 160 × 160 × 700 (kureba) kwematanda emubhedha pasi pemukati memaviri vhiri. Shandisa chikamu cheyero kuti utarise kana muchina wacho wakaringana kana kwete.
5, Kana tafura yekushanda yaiswa, kukwirira kunofanirwa kunge kuchipindirana nekufuga gumbeze uye nhanho. Iyo bepa yekudyisa (isa mukati) shaft uye machira kudyisa (isa mukati) shaft inofanira kunge iri yakafanana nhanho ine kudziya tangi.
Nezve iyo mushure-yekutengesa sevhisi
A. Kana iyo khalenda roller kupisa muchina muchina ine dambudziko, mutengi anogona kutora pikicha kana vhidhiyo kune nyanzvi.
B. Nyanzvi ichadzidzisa mutengi kugadzirisa nekushandisa iyo roller kupisa muchina wekudhinda kuburikidza neinternet.
C. Uye isu tichakumbira mutengi kuti adzorere iro bhodhi izvo zvisiri izvo kuti riongorore.
D. Titende. Nyanzvi izere neruzivo, uye zvekutengesa zvakare zvinoramba zvichitaurirana nemutengi.
Pashure: Calender Heat Press Machine
Zvadaro: Akangwara Kudzora Jersey Calandra Roll Heat Press Machine